တစ်ဖက်သတ်ချစ်နေသူဆီက တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရလိုက်လို့ ပျော်နေတဲ့ ကောင်းမြတ်စံ - Cele Connections
တစ်ဖက်သတ်ချစ်နေသူဆီက တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရလိုက်လို့ ပျော်နေတဲ့ ကောင်းမြတ်စံ
admin | 01/11/2019 | Celebrity | No Comments
မင်းသားချောလေးကောင်းမြတ်စံဟာ ပြုံးရယ်လိုက်တိုင်း ပါးချိုင့်လေးတွေနဲ့အတူ အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံးမျက်နှာလေးကြောင့် ပရိသတ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ သူက Forever Groupရဲ့ စင်တင်မင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမြတ်စံဟာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးရာမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အံဝင်ခွင်ကျသရုပ်ဆောင်နိုင်လို့ ပရိသတ်တွေက ချီးကျူးနေကြတာပါ။ မကြာသေးခင်က ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသောအမှန်တရား ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့လည်း ပရိသတ်အားပေးမှုကို တခဲနက်ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကောင်းမြတ်စံဟာ သူ့ရဲ့အချစ်ရေးကိုတော့ ထုတ်ဖော်မပြောပြဖူးတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက စောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတော့ အဖီးလ်တလိုင်းလေးတွေ မကြာခဏတင်လေ့ရှိတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက သို့လော သို့လောဖြစ်နေကြပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလည်း ကောင်းမြတ်စံက “နိုဝင်ဘာ ၁ရက်နေ့မှာ အသည်းလေးလာပေးတာဟာ ချစ်တယ်လို့ပြောတာပဲ မှတ်ယူတယ်” …. လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမျှဝေခဲ့တဲ့စာသားလေးက ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်လည်းဆိုတာ ပရိသတ်တွေက သိချင်နေကြပါပြီ။
ကောင်းမြတ်စံကို အသည်းလေးလာပေးတဲ့သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင် ခန့်မှန်းကြည့်ကြပါဦးနော်။ ပါးချိုင့်မင်းသားလေး ကောင်းမြတ်စံရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို Cele Connections ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Source – Kaung Myat San
တဈဖကျသတျခဈြနသေူဆီက တုံ့ပွနျမှုတဈခုရလိုကျလို့ ပြျောနတေဲ့ ကောငျးမွတျစံ
မငျးသားခြောလေးကောငျးမွတျစံဟာ ပွုံးရယျလိုကျတိုငျး ပါးခြိုငျ့လေးတှနေဲ့အတူ အပွဈကငျးတဲ့ အပွုံးမကျြနှာလေးကွောငျ့ ပရိသတျခဈြခငျအားပေးမှုကို ရရှိနသေူတဈယောကျပါ။ သူက Forever Groupရဲ့ စငျတငျမငျးသားတဈယောကျအဖွဈ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို အားသှနျခှနျစိုကျ လုပျဆောငျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကောငျးမွတျစံဟာ ဇာတျလမျးတှဲတှေ ရိုကျကူးရာမှာလညျး ကရြာဇာတျရုပျကို အံဝငျခှငျကသြရုပျဆောငျနိုငျလို့ ပရိသတျတှကေ ခြီးကြူးနကွေတာပါ။ မကွာသေးခငျက ထုတျလှငျ့ပွသခဲ့တဲ့ ပြောကျဆုံးနသေောအမှနျတရား ဇာတျလမျးတှဲနဲ့လညျး ပရိသတျအားပေးမှုကို တခဲနကျထပျမံရရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါ ရောကျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ကောငျးမွတျစံဟာ သူ့ရဲ့အခဈြရေးကိုတော့ ထုတျဖျောမပွောပွဖူးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ စောငျ့ကွညျ့နကွေတာပါ။ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာတော့ အဖီးလျတလိုငျးလေးတှေ မကွာခဏတငျလရှေိ့တာကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေ သို့လော သို့လောဖွဈနကွေပါတယျ။ မကွာသေးခငျကလညျး ကောငျးမွတျစံက “နိုဝငျဘာ ၁ရကျနမှေ့ာ အသညျးလေးလာပေးတာဟာ ခဈြတယျလို့ပွောတာပဲ မှတျယူတယျ” …. လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ သူမြှဝခေဲ့တဲ့စာသားလေးက ဘယျသူ့ကို ရညျရှယျလညျးဆိုတာ ပရိသတျတှကေ သိခငျြနကွေပါပွီ။
ကောငျးမွတျစံကို အသညျးလေးလာပေးတဲ့သူက ဘယျသူဖွဈမလဲဆိုတာ ပရိသတျကွီးကိုယျတိုငျ ခနျ့မှနျးကွညျ့ကွပါဦးနျော။ ပါးခြိုငျ့မငျးသားလေး ကောငျးမွတျစံရဲ့ စှဲမကျဖှယျကောငျးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို Cele Connections ခဈြပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
လူမှုကွန်ယက်မှာ သူမအယောင်ဆောင်ပြီး ပိုက်ဆံသိန်းနဲ့ချီ လိုက်လိမ်လည်နေသူအကြောင်း ဖွင့်ထုတ်လာတဲ့ မေမြင့်မိုရ်
” ဘျောဒီအခြိုးအစားနဲ့ပတျသကျပွီး ပရိသတျကို ဖှငျ့ဟအကွံဉာဏျတောငျးခဲ့တဲ့ မယျလိုဒီ “
“Mask ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျချုပ်နေတဲ့ အမေကိုကြည့်ကာ တွေးပူနေတဲ့ ရောဂါတချို့ကို မေ့ပျောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ နေမင်း”
“ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ အပြုအမှုလေးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ”